गलबन्दी बिबादः अनुहार मिल्दैमा अर्काको श्रीमतीलाई आफ्नो भन्न मिल्छ र ? | Kendrabindu Nepal Online News
गलबन्दी बिबादः अनुहार मिल्दैमा अर्काको श्रीमतीलाई आफ्नो भन्न मिल्छ र ?
२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:१८
यतिखेर गायक प्रकाश सपुतलाई ‘अन्तिम गाँसमा ढुंगा’ लागेको छ । ‘अन्तिम गाँसको ढुंगा’ भएकैले हुनुपर्छ गलबन्दी गायक प्रकाशकोे दाँतमा भने खासै असर पारेको देखिन्न ।
प्रसंग हो, गायक एवम सर्जक प्रकाश सपुतको चर्चित गीत ‘गलबन्दी’को लय चोरीको आरोप ।
यो गीतको लय पूर्वेली बरिष्ठ लोक गायक शम्भू राईको गीतसँग मेल खाएको भन्दै एकाएक विवादमा तानियो । ‘बोलमाया’ र ‘गलबन्दी’ जस्ता अत्यन्तै उत्कृष्ट सृजनाका कारण चर्चा कमाएका प्रकाश अहिले करोडौं नेपालीको मन मुटुमा बसिसकेका छन् जसको ज्वलन्त उदाहरण उनको गीतको युट्युव भ्यूअर्स बनिसकेका छन । यो सामग्री तयार पार्दासम्म यो गीतलाई एक करोड ५ लाख ४१ हजार २ सय ७० पटक हेरिएको छ । बिश्वभरि रहेका करोडौं नेपालीबाट उनले यतिधेरै माया, सम्मान र इज्जत उनले पाएका छन जसमा उनले ‘नेपाली सपुत’को समेत उपमा पाइसकेका छन् ।
उसो त गीतका वारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ । गायक शम्भुराईले यसबारेमा सार्वजनिक रुपमा केही नबोली गीतको बारेमा अनुसन्धान हुँदैछ भनेका छन । प्रकाश सपुतले भने आफुले उक्त गीत भर्खर मात्र सुनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आम नेपाली दर्शक स्रोता भने प्रकाश सपुतले लय चोरेको आरोप मान्न तयार देखिन्नन् । युट्युवमा आएका कमेन्टहरु नियाल्दा धेरैजसो प्रकाशमा समर्थनमा देखिएका छन् भने कतिपय भने ‘माफी हुन्छ क्या मालुम मायाको गल्तीमा’ भन्दै माफी दिनुपर्ने बताईरहेका छन् । केहीले चाँही बिर्सीसकेको पुरानो लयलाई ल्याएर आम जनमानसमा पुर्याउनु सपुतको ठूलो काम हो भन्न भ्याएका छन् भने केहीले भने जानीजानी कपि गरेको भए प्रकाशले गायक राईसंग अनुमति लिनुपर्थ्यो समेत भनेका छन् ।
गीत चोरी भयो भन्ने युट्युव भिडियोको कमेन्टमा जीत कुमार बिसी लेख्छन, ‘गीत भनेपछि सवै एउटै सुन्नेले चोरेको भन्लान तर अलि अलि बुझ्नेले बुझ्छ गीत बिल्कुलै फरक छ ।’
राजन पोखरेल उक्त समाचार प्रकाशन गर्ने युट्युव च्यानलाई नै हावाको संज्ञा दिदै भन्छन, ‘खै कताबाट मिल्यो हावा’ यसैगरि खर्क सिंहले रमाईलो तरिकाले कमेन्टमा भनेका छन, ‘होइन हजुर लोकगीतहरु धेरै जसो मिलेको हुन्छ मान्छेको अनुहार पनि त कसैको एउटै मिलेको हुन्छ अनुहार मिल्यो भन्दैमा त्यो मेरो श्रीमती हो भन्न मिल्छ र ? अरु कसैको चित्त दुखाउनु गलत हो । सके राम्रो गरौ नसके नराम्रो पनि कसैलाई नगरौं ।
यु ट्युव कमेन्टमै सृजन बानिया लेख्छन, ‘पायो भन्दैमा जे पायो त्यहि भन्न त हुँदैन नि अलि अलि धुन मिल्यो भन्दैमा सिधै कपिड भन्दिने ?’
यी लगायत केही नकारात्मक कमेन्ट पनि नभएका हैनन् । तर पनि अधिकांश कमेन्ट भने गायक प्रकाश सपुतकै सपोर्टमा छन् ।
‘गलबन्दी’ को ऐतिहासिक रेकर्ड र विवाद
गलबन्दी, प्रकाश सपुत
Prevपोखरामा गोली चल्यो
गुठी विधेयक फिर्ता गराउन संघर्ष समिति गठनNext